musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Mutungamiri wePhilippines anosiya zvematongerwo enyika » Page 2
Mutambi wetsiva Manny Pacquiao ndiye akatanga kupa mukana wake wesarudzo yemutungamiri wenyika neChishanu.
Meya Manila Meya Francisco 'Isko' Moreno, pamwe naseneta uye aimbova mukuru wemapurisa Panfilo Lacson, vazivisawo chinangwa chavo chekukwikwidza.
Vaongorori vanoti zvakakosha kuti Duterte ave nemutsivi akavimbika kuti amubvise kubva kumatare edzimhosva - kumba kana neInternational Criminal Court - pamusoro pezviuru zvekupondwa kwenyika muhondo yake yekurwisa zvinodhaka kubvira 2016.
"Ndingatora chiziviso chake nemunyu wakawanda," Carlos Conde, Firipaini muongorori weNew York-based Human Rights Watch, akadaro. “Asi uchifunga kuti achazonyatsorega basa, hazvireve kuti haazowana dziviriro kubva kuna ICC yaanoshuva. ”
Pakati paGunyana, iyo International Criminal Court (ICC) muNetherlands yakatanga kuferefeta kuuraya zvisina tsarukano uye dzimwe mhosva dzakaparwa panguva yehondo yeutsinye yemishonga yakatangwa naDuterte muPhilippines. Paakave mutungamiri wenyika, akavimbisa kubvisa nyika zvinodhaka, uye akaraira mapurisa kupfura vanotengesa zvinodhaka nevanodhakwa vachiona kana mapurisa achizvitenda kuti ave munjodzi.
Sekureva kwehurumende yePhilippines data, vanhu 6,181 vakaurayiwa mumapurisa kubva muna 2016. Zvisinei, sekureva kwe ICC, nhamba chaiyo inogona kunge iri pakati pezviuru gumi nezviviri kusvika makumi matatu, zvichitsanangura zviito zvevachengeti vemutemo se "kurwisa kwakapararira uye kwakarongeka pamusoro pevanhuwo zvavo."
Duterte akafuridzira kuferefetwa kakawanda, achiti International Criminal Court yakanga isina masimba pamusoro pePhilippines mushure mekunge nyika yasiya ICC munaKurume 2019, uye ichivimbisa kudzora vaongorori kubva munyika. Zvisinei, ICC inosimbisa kuti ine simba rekuongorora mhosva dzainoti dzakaitwa muSoutheast Asia state pakati pa2017 na2019 payanga ichiri nhengo.
Ongororo yeICC inoita kuti sarudzo yemutungamiriri wenyika iri kuuya ive yakakosha kumusasa weDuterte, sezvo mumiriri wezvematongerwo enyika anokwikwidza achitora kukunda anogona kuvhurira mutungamiri wenyika kutongwa.